Waa maxay faa'iidooyinka iibsiga faallooyinka YouTube?
Hagaajinta Darajooyinka Muuqaalada Raadinta ee Fiidiyahaaga
Ku Dhiirrigeliya Kuwa Kale Inay Faallo Ka Bixiyaan Fiidiyahaaga
Waxay dhiirigelisaa doodaha si loo bilaabo
Waxaan Dib U Eegi Doonnaa Muuqaalkaaga & Waxaan Qornaa Faallooyin Tayo ah
Waxaad soo gudbin kartaa faallooyinkaaga haddii aad doorato
Faallooyin ayaa ku faafaya dhowr maalmood
Faallooyinka waxay ka bilowdaan Saacadaha 24-72
Siyaabaha lagu gato faallooyinka YouTube waxay kaa caawin karaan kanaalkaagu inuu noqdo mid caan ah
Waqtigan xaadirka ah, YouTube waxaa loo arkaa mid ka mid ah adeegyada fiidyaha ee loogu isticmaalka badan yahay adduunka. Waxa ay la kulantay koboc baaxad leh sannadihii la soo dhaafay oo waxa ay noqotay meesha loogu jecel yahay dhajinta iyo daawashada macluumaadka fiidyowga. Isticmaalayaal badan oo awooday inay ururiyaan tiro wanaagsan oo raacsan ayaa sidoo kale ka helay faa'iidooyinka lacagta. Markaa shaki kuma jiro in YouTube ay la timaado faa'iidooyin badan. Hagahan soo socda ayaa kaa caawin doona inaad dhisto kanaal YouTube ah oo guuleysta oo aad faa'iido badan ka hesho.
Si aad u dhisto kanaal guulaysta, tallaabada ugu horreysa ee aad qaadayso waa dhisidda saldhig dhegaystayaal oo xooggan. Dhegaystayaasha, oo loo yaqaan macaamiisha YouTube-ka, waxay u keeni doonaan muuqaal badan kanaalkaaga iyagoo jecel fiidiyowyada, ka faallooda, oo u gudbiya asxaabtooda. Waa muhiim inaad la shaqeyso rukunsahaaga oo aad dhagaysato haddii aad rabto in kanaalkaagu caan noqdo. Faallooyinka ayaa aad muhiim ugu ah guusha kanaalkaaga. Waad awoodaa iibso faallooyinka YouTube YTpals oo isticmaal xeeladahan soo socda si aad ula xidhiidho macaamiishaada qaybta faallooyinka.
Waa maxay muhiimada ay leedahay istaraatijiyad faallooyin wax ku ool ah?
YouTube maaha kaliya daawashada fiidiyowyada, maadaama ay u ogolaato dadka inay ku wada falgalaan qaybta faallooyinka sidoo kale. Faallooyinku waa hab wanaagsan oo loogu talagalay abuurayaasha macluumaadka si ay ula falgalaan dhagaystayaashooda iyo lidkeeda. Waxay u ogolaataa abuurayaasha nuxurka inay dhagaystaan ​​waxa macaamiishooda ay ka sheegaan waxa ku jira. Qaybta faallooyinka ee YouTube-ka ayaa qayb weyn ka ciyaarta dhisida xidhiidhka dhagaystayaasha. Fiidiyowyo leh faallooyin badan ayaa u muuqda inay helaan aragtiyo badan. Waxaa la ogaaday in inta badan fiidiyowyada leh ku dhawaad ​​​​5,000 faallooyin ama ka badan ay awoodaan inay helaan ku dhawaad ​​1 milyan oo aragtiyood. Aragtida iyo faallooyinku waxay u janjeeraan inay wada socdaan, maadaama kororka mid ka mid ah uu keeno kororka kan kale.
Markaad bilowdo kanaalka YouTube, hadafka koowaad waa inaad kordhiso muuqaalkaaga goobta oo dhan. Faallooyinku waa xoogga horseeda kordhinta muuqaalka. Faallooyinka ayaa saameyn ku yeelan kara daawadayaasha si ay u daawadaan muuqaalka oo dhan, dib u daawadaan muuqaalka oo ay la wadaagaan qoyskooda iyo saaxiibadooda. Istaraatiijiyad faallooyin wax ku ool ah muhiim uma aha oo kaliya helitaanka aragtiyo laakiin sidoo kale waxay ku hagaysaa daawadayaasha in badan oo ka mid ah macluumaadkaaga. Xeeladda faallooyinka wanaagsan waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad xoojiso farriinta aad rabto inaad ku dirto kanaalkaaga.
Xeeladaha Wadista Faallo badan oo Fiidyahaaga YouTube ah
Faallooyinku waxay caddayn karaan inay faa'iido badan leeyihiin haddii aad rabto inaad jawaab celin toos ah ka hesho daawadayaashaada oo aad ka abuurto sheeko ku wareegsan fiidiyowyadaada. Hadda oo aad fahantay muhiimada ay leedahay istaraatiijiyad faallayn oo wax ku ool ah, aan eegno qaar ka mid ah hababka loo isticmaali karo in lagu kiciyo faallooyin badan oo fiidiyowyadaada ah. Waxaad isticmaali kartaa tiro kasta oo hababkan ah si aad u horumariso istiraatijiyada faallooyinkaaga. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa faallooyinka YouTube si aad u caawiso habkan.
1. Weydii su'aalo dhamaadka fiidiyowyada.
Waa inaad had iyo jeer isku daydaa inaad su'aalo ka waydiiso daawadayaashaada dhamaadka fiidiyowyada. Su'aalahani waxay noqon karaan kuwo furan, si kastaba ha ahaatee, su'aalo gaar ah oo ku dhiirigeliya daawadayaasha inay faallo ka bixiyaan ayaa faa'iido badan kuugu yeelan doonta kiiskan. Haddi taadu tahay muqaal waxbarsho, waxaad waydiin kartaa daawadayaasha bal inay faa'iido u heleen talooyinka iyo in kale. Waxa kale oo aad wadi kartaa ka qaybgalka adiga oo waydiinaya daawadayaasha nooca macluumaadka ay rabaan inay arkaan. Waxaad ka heli doontaa xoogaa jawaabo dammaanad ah qaybta faallooyinka. Ma aha oo kaliya inaad heli doonto fikrado aad u wanaagsan fiidyaha mustaqbalka, laakiin sidoo kale waxaad awoodi doontaa inaad ku xidho macaamiishaada heer shakhsi ahaaneed.
2. Faallooyinka ugu horreeya ka samee qaybta faallooyinka.
Mararka qaarkood, sida ugu wanaagsan ee aad ugu dhiirigelin karto taageerayaashaada inay soo dhigaan faallooyin badan waa adiga oo faallooyinka ugu horreeya laftaadu ka dhiibto. Waad hogaamin kartaa oo dhejin kartaa faallo soo jiidata macaamiisha oo bilaw wada hadal ku saabsan fiidiyowga. Waqti ka dib, macaamiishaadu waxay aad ugu raaxaysan doonaan inay ka faalloodaan fiidiyowyadaada. Siyaabo kale oo loo isticmaalo isla istiraatiijiyad la mid ah ayaa ah adigoo waydiinaya qof aad shakhsi ahaan u taqaan inuu faallo ka tago. Istaraatiijiyadan faallooyinka ayaa sidoo kale u shaqeysa. Faallooyinka ay soo dhejiyaan asxaabta iyo qoyska ayaa sidoo kale ku dhiirigelin doona macaamiisha inay soo dhejiyaan faallooyin badan. Sidan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad dhisto bulsho isku xidhan oo maalin walba is-dhex-gasha.
3. U fiirso nuxurka ugu waxqabadka wanaagsan si aad u fahanto ka qaybgalka
Waxaad isticmaali kartaa falanqaynta YouTube si aad u go'aamiso fiidiyowyada arkay hawlgelinta ugu badan. Intaa ka dib, waxaad xaqiijin kartaa arrimaha keenaya ka-qaybgal weyn. Haddi ay ahaan lahayd dhererka fiidyaha ama liisaska heesaha qaarkood. Waxaa la ogaaday in fiidiyowyada ka gaaban 2 daqiiqo ay u janjeeraan inay helaan heerar ka qaybqaadasho guud ahaan, marka la barbar dhigo fiidiyowyada 5-daqiiqo ah. Marka aad ogaato arrimaha ka dhigaya fiidiyowyadaada inay si fiican u qabtaan, waxaad ku soo celin kartaa fiidiyowyadaada cusub. Tani waxay ilaalin doontaa dhagaystayaasha inay ku mashquulaan faallooyinkana way sii socon doonaan.
4. Qabo Tartamada YouTube-ka.
Si la mid ah tartamada Instagram iyo Facebook, waxaad sidoo kale ku qaban kartaa tartamo YouTube-ka, si aad uga qayb qaadato kanaalkaaga. Tartannada YouTube waa hab fiican oo lagu helo faallooyin, macaamiil, iyo kuwa jecel fiidyahaaga, dhammaan isku mar. Si kastaba ha noqotee, waxaad u baahan doontaa xoogaa lacag ah oo dheeri ah oo sidoo kale waa inaad gelisaa dadaal badan si aad u horumariso tartanka. Tartannada YouTube waa hab wanaagsan oo lagu soo jiito dareenka kanaalkaaga, taas oo ku dambayn doonta faallooyin badan oo fiidiyowyadaada mustaqbalka fog ah. Waxaad sidoo kale ku dhiirigelin kartaa daawadayaashaada inay soo dhigaan faallooyinka qayb ka mid ah tartanka.
5. Qalbiga faallooyinka macaamiisha.
Waxaad kula xiriiri kartaa macaamiisheeda heer shakhsi ah adiga oo jecel faallooyinka ay ku dhejiyaan fiidiyowyadaada hoostooda. Markaad jeceshahay faallooyinka, daawadayaashu waxay awoodi doonaan inay arkaan wadne guduudan oo ay la socoto calaamad yar oo kanaalkaaga ah. Qofka faallooyinka soo geliyay wuxuu kaloo heli doonaa ogeysiin ah in faallooyinkiisa la jeclaaday. Marka daawadayaasha ay arkaan adiga oo la falgalaya dadka kale faallooyinka, waxaa lagu dhiirigelin doonaa in ay soo dhigaan faallooyin badan. Sidan, waxaad awoodi doontaa inaad dhisto daacadnimada taageereyaasha oo aad sidoo kale muujiso inaad qadarinayso daawadayaashaada.
6. Ku dheji faallooyinka qaarkood.
Pinning waa hab fiican oo aad ku muujin karto faallooyinka qaarkood. Waxay hubisaa in faallooyinka la dhejiyay ay tahay faallooyinka ugu horreeya ee daawadayaashaadu ay arkaan fiidyowgaaga hoostiisa marka ay hoos ugu dhaadhacayaan qaybta faallooyinka. Waxaad ku dhejin kartaa faallooyinkaaga si aad ula sheekaysato daawadayaasha ama waxaad dhejin kartaa faallooyinka macaamiisha. Tilmaamaha dhejinta ayaa u fiican -
Weydiinta su'aalo gaar ah dhagaystayaasha.
Ka bixinta caddaynta ku saabsan muuqaalka.
Ku jeesjeeska daawadayaasha ukunta Easter-ka ama horumar gaar ah.
U mahadcelinaya daawadayaasha daawashada muuqaallada.
Muuji faallooyinka khuseeya macaamiisha
Haddii aad aragto mid ka mid ah kanaalada ugu waxqabadka sarreeya YouTube, waxaad ka heli doontaa hal shay oo caadi ah oo ka mid ah - joogtaynta. Si aad ugu wadid ka-qaybgalka kanaalkaaga, waa inaad si joogto ah u cusboonaysiisaa oo aad u daabacdaa fiidyaha. Waa muhiim inaad u hoggaansanto jadwal adag si ay daawadayaasha u ogaadaan goorta aad soo gelin doonto fiidiyowgaaga xiga. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ka dhigan tahay inaad u soo saarayso nuxurka aawadood. Xitaa haddii jadwalkaagu uu soo dhejinayo hal fiidiyow toddobaad kasta, waa muhiim inaad ka dhigto waxa ku jira dhagaystayaasha. Haddii daawadayaasha ay u arkaan fiidiyowyadaada mid xiiso leh oo gaar ah, ka dibna waxay sii wadi doonaan inay soo dhejiyaan faallooyinka.
8. Ku dar CTA
Waa muhiim in lagu daro wicitaanka ficilka (CTA) muuqaal kasta. Tan waxaa lagu dari karaa qayb kasta oo fiidiyowga ah, hadday bilow tahay, hadday tahay badhtamaha dhammaadka. Ujeedada ugu weyn ee CTA waa in la waydiiyo dadka inay ku biiraan kanaalkaaga. Waxaad isticmaali kartaa sifada tafsiirrada oo waxaad dhigtaa sanduuq yar oo ku yaal geeska bidix ee sare ee shaashadda, adigoo waydiinaya daawadayaashaada inay rukunto kanaalkaaga. Marka daawadayaasha ay arkaan CTA waqti ka waqti, waxaa lagu xasuusin doonaa inay ku biiraan kanaalkaaga. Markaad kasbato macaamiisheeda, faallooyinka iyo kuwa jecel waxay si toos ah ugu kordhayaan fiidyahaaga.
9. Isticmaal widget-ka YouTube ee blog-kaaga iyo mareegahaaga
Hab kale oo weyn oo lagu kaxeeyo ka-qaybgalka kanaalkaaga YouTube waa adoo gelinaya widget-ka YouTube ee blog-kaaga ama mareegahaaga. Widget-ka YouTube wuxuu ahaan lahaa hab fiican oo lagu keeno macaamiil cusub maadaama kuwa raacsan blog-kaaga iyo booqdayaasha mareegta ay ogaan doonaan kanaalkaaga YouTube. Haddii ay ku raacaan macluumaadkaaga qaab dhismeedka kale, waxay u badan tahay inay sidoo kale iska diiwaan galiyaan kanaalkaaga YouTube. Tani waxay, markeeda, u oggolaan doontaa inay ku dhejiyaan faallooyinka kanaalkaaga YouTube maaddaama ay heli doonaan fursad ay kula macaamilaan heer shakhsi ah.
10. Dhis shabakad
Haddii macaamiishu jecel yahay kanaalkaaga, waxaa jirta fursad ay ku heli karaan kanaalada kale ee la xidhiidha sidoo kale. YouTube waxay u ogolaataa abuurayaasha inay ku daraan kanaalada kale ee YouTubers bogga talada. Si la mid ah, waxaad waydiisan kartaa kanaalada kale ee la xidhiidha inay kanaalkaaga ku muujiyaan bogga talooyinka si daawadayaashooda ay ugu dhiirigeliyaan inay ku biiraan kanaalkaaga. Sidan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku sawirto aragtiyo badan, macaamiisha, iyo faallooyinka kanaalkaaga.
11. La falgeli macaamiisha.
Tani waxay u muuqataa xeelad cad, in ka jawaabista faallooyinka macaamiishaada ay soo jiidan doonto faallooyin badan. Markaad ka jawaabto faallooyinka daawadayaasha, waxay sidoo kale ku tusaysaa inaad dhegaysato iyaga oo aad xiisaynayso ra'yigooda. Waa inaad sida ugu fiican u qaadataa dhowr daqiiqo maalin kasta si aad ula falgasho daawadayaasha. Ka sokow faallooyinka kanaalkaaga, waxay ahaan lahayd fikrad fiican inaad la falgasho daawadayaasha qaybaha kale ee faallooyinka ee kanaalada sidoo kale. Haddii daawadayaashan ay faallooyinkaaga u arkaan mid xiiso leh, waxay isku dayi doonaan inay maraan profile kaaga sidoo kale. Sidan, waxaad ku kasban kartaa macaamiil cusub.
12. Isticmaal ereyada furaha si wax ku ool ah.
Isticmaalka ereyada muhiimka ah ee fiidiyowga si wax ku ool ah ayaa aad muhiim u ah haddii aad rabto inaad kaxayso ka-qaybgalka saxda ah ee kanaalkaaga YouTube. Erayada muhiimka ah waxaa loo adeegsadaa marka qofku uu si gaar ah wax u raadinayo. Haddii aad isticmaasho ereyada muhiimka ah ee saxda ah, suurtogalnimada fiidiyowyadaadu inay gaadhaan daawadaha saxda ah ayaa kordha. Waxaa la ogaaday in in ka badan 60% macaamiisha cusub ee kanaalka ay inta badan ka yimaadaan xulashada raadinta YouTube. Haddii aadan isticmaalin ereyada muhiimka ah ee saxda ah ama ereyada muhiimka ah ay fidsan yihiin khafiif, markaas waxaa laga yaabaa in fiidiyowyadaadu aysan ka soo muuqan natiijooyinka raadinta. Waa muhiim in la qeexo sida ugu macquulsan marka la abuurayo tags keywords. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa aaladaha khadka tooska ah si aad u heshid talooyin ku saabsan ereyada muhiimka ah.
13. Horumarinta Kanaalka.
Waa muhiim inaad ku xayeysiiso kanaalkaaga kaliya maaha YouTube laakiin sidoo kale meel ka baxsan. Tani waxay u furi doontaa kanaalkaaga YouTube daawadayaasha qaybo kala duwan. Markay bilaabaan inay raacaan macluumaadkaaga fiidyaha, waxay bilaabi doonaan inay faallo ka bixiyaan, wadaagaan, oo ay jeclaadaan fiidyahaaga sidoo kale. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah siyaabaha aad u suuqgeyn karto kanaalkaaga YouTube-ka -
Ku xidh kanaalkaaga YouTube boggaga warbaahinta bulshada.
U soo gudbi kanaalka YouTube mareegaha calaamadaynta bulshada.
Ku dar kanaalka matoorada raadinta muuqaalka.
Ku xidh isku xirka kanaalkaaga YouTube ee liisaska waraaqaha.
Isticmaal URL-kaaga YouTube marka aad ku dhejinayso faallooyinka blogyada iyo wixii la mid ah.
14. U isticmaal sawir-gacmeedyo xiiso leh waxa ku jira muuqaalkaaga
Haddii aad rabto inaad soo jiidato macaamiil cusub waa muhiim in sawir-gacmeedkaagu uu soo baxo. Dadku waxay aad ugu dhow yihiin inay gujiyaan fiidiyowgaaga haddii ay u arkaan thumbnail mid xiiso leh. Si kastaba ha ahaatee, tani macnaheedu maaha inaad bilawday inaad u isticmaasho sawirada clickbait sidii thumbnail ahaan. Uma badna in daawadayaasha ay raacaan kanaalkaaga haddii aad isticmaasho istaraatijiyad gujibait. Ujeedada ugu weyn ee isku darka thumbnail xiiso leh waa in la kordhiyo aragtiyaha aad hesho. Haddii aad awoodo inaad siiso daawadayaasha tusmooyin wanaagsan, aragtiyadu waxay keeni doonaan faallooyin iyo jecel sidoo kale.
15. Isticmaal sifada cusub ee shaandhaynta faallooyinkaaga
Muuqaal cusub oo ku jira istuudiyaha YouTube (miiska) ayaa kuu oggolaanaya inaad shaandhayso faallooyinka kanaalkaaga. Waxaad u isticmaali kartaa tan si aad u raadiso faallooyin gaar ah oo aad u nadiifiso raadinta, iyada oo ku saleysan -
Xaaladda xubinta kanaalka.
Lambarka macaamiisha faallooyinka.
Waxa kale oo aad isticmaali kartaa filtarka si aad u eegto faallooyinka haya su'aalo gaar ah si aad awood ugu yeelato inaad si fudud uga jawaabto. Tan ka sokow, waxaad isticmaali kartaa sifadan si aad dib ugu eegto faallooyinka aad hayso ama aadan ka jawaabin.
Ugu dambeyntii, waxaad ka iibsan kartaa faallooyinka YouTube YTpals. Iibsashada faallooyinka YouTube waxay u noqon kartaa ikhtiyaar aad u wanaagsan kuwa hadda bilaabay socdaalkooda YouTube, maadaama daawadayaasha qaarkood ay markii hore ka caga jiidayaan inay faallooyin ku dhejiyaan fiidiyowyada aan faallooyinka lahayn. Tani waa ikhtiyaar wanaagsan oo loogu talagalay xisaabaadka la aasaasay sidoo kale, markaad adeegsato xeeladaha aan soo sheegnay oo aad iibsato faallooyinka YouTube si ay kaaga caawiso habka.
Maxay tahay sababta aad u iibsanayso faallooyinka YouTube?
Hadda oo aad taqaanid xeeladaha kordhinta tirada faallooyinka ee kanaalkaaga, waa waqtigii aad fiirin lahayd muhiimadda ay leedahay iibsashada faallooyinka YouTube. Baraha bulshada waxaa maanta ka jira tartan aad u xooggan, waxaana adkaatay in caan laga helo baraha bulshada sida Youtube-ka. Tani waa sababta oo ah dad badan oo caan ah oo si fiican loo aasaasay ayaa sidoo kale u jeestay aaladaha sida YouTube si ay u abuuraan wax. Tani waa sababta ay muhiim u tahay in la hagaajiyo xeeladaha oo la raadiyo habab cusub oo lagu kaxeeyo ka qaybgalka kuwa raacsan.
Haddii aad iibso faallooyinka YouTube bixiyeyaasha adeegga sida YTpals, waxaad awoodi doontaa inaad kor u qaaddo guusha kanaalkaaga. Aynu eegno qaar ka mid ah faa'iidooyinka iibsashada faallooyinka YouTube.
1. Kordhi aqoonsiga fiidiyowyadaada.
Waxaad ka heli kartaa faa'iidooyinka kala duwan ee YouTube kaliya ka dib markay xoogaa aqoonsi ka helaan daawadayaasha. Markaad iibsato faallooyinka YouTube, suurtogalnimada in fiidyahaaga la aqoonsado way korodhaa. Haddii aad rabto inaad ku guulaysato YouTube, fiidiyowyadaadu waxay u baahan yihiin inay helaan macaamiil kugu filan, jecel, iyo faallooyin. Iibka faallooyinka ayaa ka dhigaya shaqada mid fudud, maaddaama faallooyin badani ay sidoo kale kaxeeyaan aragtiyo badan iyo kuwo jecel. Inkasta oo laga yaabo in fiidyowyadaadu aanay helin isla tirada faallooyinka ay helaan dadka caanka ah ee YouTube, iibsashada faallooyinka YouTube waxay hubaal ka dhigaysaa aqoonsiga kanaalkaaga indhaha daawadayaasha.
2. Kordhi darajada kanaalkaaga YouTube
Gudaha YouTube, kala saraynta kanaalada waxaa badanaa lagu go'aamiyaa tirada macaamiisha uu kanaalka leeyahay. Macmiilku wuu kala duwanaan karaa iyadoo ku xidhan tirada faallooyinka iyo sida uu u jecel yahay fiidiyow kasta. Tani waa sababta kororka tirada jecel iyo faallooyinka ay keento kororka saamiga ee darajada kanaalka YouTube. Tani waxay tusinaysaa xaqiiqda ah in faallooyinka ay aad muhiim ugu yihiin guusha kanaalka YouTube-ka. Markaad iibsato faallooyinka YouTube, waxaad kordhin kartaa darajada kanaalkaaga adiga oo kordhinaya fursadaha aad ku heli karto macaamiil badan.
3. Fiidiyowyadaada ka dhig mid fayras ah
YouTuber kastaa waxa uu rabaa in nuxurkiisu noqdo fayras, si kastaba ha ahaatee, ma jirto qaacido go'an oo taas lagu gaadho. Si loo abuuro nuxurka fayras, abuuruhu waa inuu waqti badan galiyaa oo uu ku dhiirrigeliyaa dhexdhexaadin kala duwan si uu u abuuro buuq ku wareegsan fiidiyaha. Inkasta oo aysan jirin dariiq dab-damis oo la hubo oo lagu helo fayras, iibsashada faallooyinka YouTube waxay hubaal ka caawin kartaa habka. Markaad iibsato faallooyinka YouTube, fiidyahaaga waxaa loo iftiimin doonaa dad badan. Marka dad badan ay gujiyaan fiidiyowyadaada, faallooyin badan ayaa ku soo qulqulaya. Qaybta faallooyinka ayaa ah waxa ugu horreeya ee daawadayaasha, xitaa ka hor intaysan ku biirin kanaalka. Markaa in aad hesho qayb faallooyin ah oo cajiib ah iibsashada faallooyinka waxay kaa caawin doontaa inaad soo jiidato daawadayaal badan.
4. Hel gujisyo badan oo jecel
Haddii aad rabto in kanaalkaagu caan ka noqdo YouTube, waa muhiim in uu helo gujisyo badan, faallooyin, iyo likes. Habka lagu helo dadka si ay u daawadaan fiidiyowyadaada waxay noqon kartaa mid dheer oo caajis ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira siyaabo aad u kicin karto habka. Mid ka mid ah siyaabaha ugu wanaagsan ee lagu bilaabi karo caannimadaada waa adigoo iibsanaya faallooyinka YouTube. Marka aad faallooyinka ka iibsato YouTube, aragtiyaha iyo waxa la jecel yahay ayaa si toos ah u soo qulqulaya iyadoo dad badani bilaabaan inay gujiyaan fiidiyowgaaga. Tani waa sababta oo ah tiro wanaagsan oo faallooyin ah oo ku jira fiidiyowyadaada waxay kordhisaa suurtagalnimada inay ka soo muuqdaan natiijooyinka raadinta.
5. Soo jiidashada macaamiisha cusub
Qaybta ugu muhiimsan ee YouTube waa daawadayaasha iyo macaamiisha. Dhammaan xeeladahaaga ayaa ugu dambeyntii ujeedadoodu tahay inay soo jiidato daawadayaal badan kanaalkaaga. Waa xaqiiqo la wada ogsoon yahay in tirada badan ee daawadayaasha iyo macaamiisha aad ku leedahay kanaalkaaga, inta badan daawadayaasha aad awoodi doonto inaad soo jiidato. Tirada faallooyinka ee fiidiyowyadaada sidoo kale waxay go'aamisaa tirada aragtida aad ku dambayn doonto inaad yeelato. Iibsashada faallooyinka YTpals waxay kaa caawin kartaa habkan waxayna kuu fududayn kartaa shaqadaada. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad soo jiidato macaamiil cusub iyadoo daawadayaasha soo booqda kanaalkaaga ay u fiirsadaan tirada faallooyinka aad horey ugu haysatey kanaalkaaga.
6. Waxay ka caawisaa abuurista caddayn bulsho
Caddaynta bulshadu aad ayey muhiim ugu tahay warbaahinta bulshada. Waa arrin la wada ogsoon yahay in dadku ay inta badan dhegaystaan ​​kanaalada leh qaar ka mid ah mawqifyada bulshada. Marka tiro badan oo daawadayaal ah aaminaan fikradda ama fikradda kanaalkaaga YouTube-ka uu faafiyo, daawadayaasha cusub ayaa si toos ah u soo qulquli doona. Sababtoo ah caddaynta bulsheed, daawadayaashan cusub waxay aad u jeclaan lahaayeen inay taageeradooda u fidiyaan kanaalka. Waxaad ka iibsan kartaa faallooyinka YouTube si aad u abuurto caddayn bulsho goobta. Marka daawadayaashu ay arkaan faallooyinka fiidyahaaga, waxay xiisayn doonaan inay wax badan ka eegaan macluumaadkaaga.
7. Ka saar faallooyinka xun
Marar badan, dadku waxay ku dhamaan karaan inay soo dhejiyaan faallooyin badan oo taban iyo nacayb ah fiidiyowyada YouTube kuwaas oo aan xidhiidh la lahayn waxa ku jira. Dad badan ayaa u isticmaala YouTube si ay u horumariyaan nacaybka iyo nacaybka. Tani waa halka iibsashada faallooyinka YouTube ay ku anfacayso. Waad soo sheegi kartaa faallooyinkan, si kastaba ha ahaatee, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa xeelad kale oo aad buuqa ku qarqiso. Markaad iibsato faallooyinka YouTube, waxaad hubin kartaa in faallooyinka togan ay hadheeyaan faallooyinkan taban, kuwaas oo laga yaabo inay ku dambayn doonaan inay dhaawacaan fiidiyowyadaada mustaqbalka fog. Tani waa istaraatiijiyad weyn oo lagu ilaalinayo trolls-ka internetka mana awoodi doonaan inay ku qancaan faallooyinka nacaybka ah.
8. Samee sumcadda goobta
Markaad iibsato faallooyinka YouTube, fiidyahaagu wuxuu bilaabi doonaa inuu ka helo aqoonsiga goobta. Markay dad badan bilaabaan daawashada fiidyahaaga, waxay kuu ogolaan doontaa inaad kor u qaaddo booskaaga booska. Tirada badan ee aragtiyadu waxay ka dhigan tahay jeclaysi badan, faallooyin badan, iyo macaamiil badan. Iyo macaamiil badan iyo faallooyin fiidiyowyadaada, daawadayaasha dheeraadka ah ayaa sidoo kale lagu dhiirigelin doonaa inay rukunto macluumaadkaaga oo ay dhejiyaan faallooyinka. Wareeggani wuu sii socon doonaa oo waxaad awoodi doontaa inaad ku gaadho meelaha dhaadheer muddo yar gudaheed. Natiijo ahaan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku jimicsato xoogaa madal ah. Ma awoodi doontid inaad ka heshid faa'iidooyinka lacag-ururinta YouTube oo keliya, laakiin waxay kaa caawin doontaa inaad dhisto iskaashiyo cusub iyo sahaminta waddooyin dheeraad ah.
9. Abuuritaanka kobaca saamiga ee faallooyinka iyo aragtida
Haddii aad hore uga soo iibsatay YouTube aragtiyada YTpals, waxay macno samayn lahayd inaad sidoo kale iibsato faallooyinka YouTube. Marka dadku arkaan kanaalkaaga, qaarkood waxay u badan tahay inay ka tagaan faallooyin. Si fiican ugama muuqato kanaalkaaga haddii saamiga u dhexeeya aragtiyaha iyo faallooyinka uu ka baxay xad aad u weyn. Waxaad xaaladan ku daweyn kartaa adiga oo iibsanaya faallooyinka YouTube ee u dhigma tirada aragtida aad ku leedahay fiidyahaaga. Marka aragtidaada iyo faallooyinkaagu ay u muuqdaan kuwo dhab ah, dadka waxaa lagu dhiirigelinayaa inay raacaan kanaalkaaga oo ay ka tagaan faallooyinka iyo waxay jecel yihiin fiidiyowyada.
10. Ka hel taraafig badan boggaaga gaarka ah
Waxaad isticmaali kartaa guusha kanaalkaaga YouTube si aad ugu wado taraafikada boggaaga gaarka ah. Markaad faallooyinka YouTube ka soo iibsato ilo lagu kalsoonaan karo sida YTpals, waxaa lagu siinayaa inaad awood u yeelan doonto inaad hesho jaceel, aragtiyo, iyo macaamiil badan. Sida saldhigga macaamiishaagu u korayo, waxaad isticmaali kartaa saameyntaada goobta si aad kor ugu qaaddo taraafikada boggaaga. Kanaalkaaga YouTube wuxuu kuu oggolaanayaa inaad beegsato dadka xiisaynaya nooca macluumaadka aad soo saarto.
Laga soo bilaabo xeeladaha aan soo sheegnay ee ra'yiga lagu wado fiidiyowyada YouTube-kaaga, waxay si cad u caddaynaysaa sida faalooyinka muhiimka ah ugu jiraan booska YouTube. Haddii aad ku cusub tahay goobta oo aad ku dhibtoonayso inaad adigu meel gaar ah samaysato, markaa waxaad ka faa'iidaysan kartaa adeegga faallooyinka YouTube ee YTpals. Markaad faallooyinka YouTube ka soo iibsato ilo lagu kalsoonaan karo sida YTpals, waxaad awoodi doontaa inaad hesho dhammaan faa'iidooyinka kor ku xusan. YTpals waxay dib u eegaan fiidyahaaga waxayna qoraa faallooyin tayo sare leh. Waxaad sidoo kale haysataa ikhtiyaarka ah inaad soo gudbiso faallooyinkaaga. Adeeggu wuxuu bilaabmi doonaa 24-72 saacadood gudahood ka dib marka la dalbado, faallooyinkana waa la faafin doonaa dhowr maalmood.